तरकारीवाली र नम्रता श्रेष्ठको फोटोले उपन्यासको चर्चा झन बढायोः सविन प्रियासन - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७३ पुष ९ गते १८:०९
पत्रकार सविन प्रियासन उपन्यासकारका रुपमा पनि परिचित छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा केन्द्रीय स्तरमै राम्रो हैसियत बनाएका प्रियासनले चार वटा उपन्यास प्रकाशित गरि सकेका छन् । उनले एउटा कथा संग्रह र एउटा सम्पादकीयको संग्रह पनि प्रकाशित गरेका छन् । पछिल्लो समयमा विएन पुस्तक संसारले प्रियासनको पल्लवी उपन्यास बजारमा ल्याएको छ । प्रस्तुत छ उपन्यास प्रकाशित हुनासाथ निस्किएको केही दिनमै हजारौ प्रति बिक्रि भइसकेको पल्लवीका लेखक सविन प्रियासनसँग दैनिक नेपालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
– पल्लवी उपन्यास कसको कथा हो ?
– पल्लवीले मुख्य के सन्देश दिन खोजेको छ ?
– पल्लवी उपन्यासको कथा वस्तुको कुरा गरिरहँदा यसमा फरक तरिकाको प्रेम प्रसँग पनि उठाइएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ?
समाजमा धेरै अप्रत्यासित घटनाहरु छन्, जसलाई हामीले स्विकारि रहेका छौं । पल्लवी उपन्यासभित्रका मुख्य दुई पात्रबीचको प्रेम पनि त्यस्तै छ । केटाको भन्दा केटीको उमेरको फरक धेरैछ । तर यो भन्दैमा उपन्यासको कथाबस्तु कसरी अगाडि बढेको छ ? यसले समाजका लागि सन्देश वजपूर्ण दिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । पल्लवी उपन्यासले सामाजिकरुपमा पनि पाठकलाई न्याय गरेको छ । पल्लवी उपन्यासको प्रेम कथा वास्तवमै सन्देशमुलक छ । हर कोहीले प्रेममा त्याग, अनि समर्पणको भाव राख्दैनन् । तर पल्लवीले समाजका लागि त्याग अनि समर्पणको भाव जगाउनेछ ।
– पल्लवी उपन्यास कसरी तयार भयो ?
– तपाईको आफ्नै कथा त होइन ?
– पल्लवी उपन्यासको कभरपेजमा तरकारी वाली अर्थात कुसुम श्रेष्ठको तस्विर राख्नुको कारण !
उपन्यासका लागि कभर गर्ल आवश्यक थियो । उहाँसँग कुरा भयो, उहाँले स्विकृति दिएपछि उपन्यासको कभरमा उहाँलाई राखिएको हो । यस बाहेक पनि कथा वस्तु अनुसार लिटल मिस–२०१६ मा पपुलर अवार्ड जित्न सफल ८ वर्षिया ऋृंखला बुढाथोकीको पनि तस्बिर राखिएको छ ।